‘सिधा कुरा जनतासँग’का पत्रकार पुडाशैनीकाे बारेमा रविले गरे यस्ताे खु!लासा !! – ताजा समाचार
‘सिधा कुरा जनतासँग’का पत्रकार पुडाशैनीकाे बारेमा रविले गरे यस्ताे खु!लासा !!
चितवन / चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासंगका पत्रकार शालिकराम पुडाशैनी झु’ण्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन् ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १ मा रहेको पोखरा बसपार्क नजिकैको कंगारु होटलमा भु”ण्डिएको अवस्थामा पुडाशैनीको श’वकाे फेला परेकाे चितवन जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको आत्मह’त्या हो वा अरु कसैले ह’त्या गरेको हो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेकाे प्रहरीले जनाएको छ । हाल परिवारलाई सम्पर्क गरेर घट’नास्थलमा आउन आग्रह गरिएको चितवन प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।
न्यूज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासंगमा रवि लामिछानेका सहकर्मी भएर काम गरेका पुडाशैनी पछिल्लो समय माउण्टेन टेलिभिजनमा कार्यरत थिए।
यसै बिच पत्रकार शालिकराम पुडाशैनी भु’ण्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि रबि लामिछानेले स्टाटस लेख्दै मर्न नडराउने भाई शालिकराम पुडासैनीले कसरी आफैलाई मा’र्ने निर्णय गरे होलान भनेका छन् । त्यस्तै उनले छातीमा लात्त्ती खाई खाई पनि प्रश्न सोध्न नडराउने उनको छाति भित्रको मुटु यति कमजोर थियो भने नलागेन समेत लेखेका छन् ।
यो घटना उनको ब्यक्तिगत जीवन वा पत्रकारिता मध्य के ले प्रभावित पारेर भयो भन्ने प्रहरी अनुसन्धान पछि खुल्ने समेत रबिले स्टाटमा लेखेका छन् ।